SHANTA Xiddig Ee Ugu Fiican Barcelona Xilli Ciyaareedkan Oo La Soo Saaray – Wararka Ciyaaraha Maanta
SHANTA Xiddig Ee Ugu Fiican Barcelona Xilli Ciyaareedkan Oo La Soo Saaray
May 17, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta 0
Kooxda Barcelona ayaa soo bandhigtay xilli ciyaareed cajiib ah marka laga reebo kulankii ceebtu ka soo raacday ee ay ku ciyaareen Anfield kagana hadheen tartanka Champions League xilli ciyaareedkan kulan ay guuldaro 4/0 ah kala kulmeen kooxda Liverpool.
Barcelona ayaa ku guulaystay horyaalka La Liga markii 2-aad oo xiriir ah iyaga oo waliba dhibco fiican ku qaaday halka ay sidoo kale gaadhay Finalka tartanka Copa del Rey-ga oo ay 25 bishan aynu ku jirno la ciyaari doonto kooxda Valencia.
Qaar ka mid ah xiddigaha Barcelona ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kuwaas oo sabab u ahaa guulaha kooxda Barcelona halka ay qaar kale soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u liita.
Wargayska Sport ee ka soo baxa magaalada Barcelona ayaa soo doortay shantii xiddig ee ugu fiicanaa kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan waliba laf dhabar u ahaa guulihii ay gaadhay.
Xiddiga ugu horeeya ayaa ah Gerard Pique kaas oo uu wargaysku siiyay qiimayn (10/8) kadib markii uu si weyn uga qayb qaatay difaacashadii fiicnayd ee kooxda ee xilli ciyaareedkan.
Xiddiga ku xiga ayaa ah Ivan Rakitic kaas oo uu wargaysku siiyay (10/8) inkasta oo uu xiddigu la kulmo dhaleecayn xoogan hadana waxa uu ka mid yahay xiddigaha uu tababare Valverde sida weyn ugu kalsoon yahay waxana uu dhaliyay 4 gool halka uu sidoo kale caawiye ka noqday 6 gool oo kale tartamada oo dhan.
Jordi Alba ayaa ah xiddiga 3-aad iyada oo uu wargaysku siiyay (8.5/10) waxana la odhan karaa xiddiga qaab ciyaareedka ugu fiican ka soo bandhigay daafaca isaga oo waliba caawiye ka noqday 13 gool sidoo kale dhaliyay 3 gool oo kale tartamada oo dhan.
Goolhaye Marc-André ter Stegen ayaa ku xiga isaga oo helay qiimayn dhan (9.5/10) waxana uu u qalmaa in uu kaalinta 2-aad kaga jiro 5-ta xiddig ee ugu fiican kooxda Barcelona marka loo eego in uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah waliba la muhiimad ahaa Lionel Messi kooxdiisana u badbaadiyay dhibco badan oo muhiim ah.
Xiddiga ugu fiican ayaa ah Lionel Messi kaas oo helay qiimayn dhan (10/10) kadib xilli ciyaareed heer sare ah oo uu soo bandhigay xilli ciyaareedkan lana odhan karo waxa uu ahaa xiddiga ugu fiican dhamaan horyaalada ugu waaweyn yurub isaga oo dhaliyay 48 gool tartamada oo dhan sidoo kale caawiye ka noqday 22 kale.
Clément Lenglet Oo Markii Ugu Horeeysay Looga Yeeray Qaranka Farnce Xilli Lacazette Laga Soo Tagay
Rivaldo: Antoine Griezmann Waxa Uu U Baahan Yahay Hal Arin Si Uu Ugu Guulaysato Barcelona.